Intermediates fanafody, fanafody Intermediates - Kanwinn
Galla chinensis Avy any Shina. ny tena singa fototra ny gallnut dia gallnut lotso-. lotso-dia hydrolyzed amin'ny gallic asidra. gallic asidra no manomboka zavatra ny maro fanafody na zava-mahadomelina intermediates.
Ny karazany antibiotika asa ny gallnut dia mahery. ny Decoction ny gallnut manana fiantraikany inhibitory samy hafa maro karazany. ny antibiotika vokany dia ny manao proteinina taolana ary coagulate mora ny tanning. hoditra no tena fizarana anisan'ny singa antibiotika.
Ny ortho-phenolic vondrona hydroxyl Misy vokany tsara eo amin'ny scavenging superoxide mitovy hevitra maimaim-poana, ary izany ihany koa ny rafitra misy eo amin'ny gallnut ny ankamaroany, noho izany manana manan-danja be taona anti-kery. gallic asidra sy ny propyl gallate no be mpampiasa toy ny Mahasalama amin'ny sakafo sy vokatra simika hafa.
MANERAN-fanantenana mba hampiasaina
Gallnut sy ny Sampanteny dia miha ampiasaina amin'ny maoderina sakafo, fanafody, fanatsarana tarehy sy ny fahasalamana orinasa.
Hatrany isika hihaona ny mitombo
Mila ny mpanjifa-penitra
vokatra sy tolotra tsara!
Shanghai Kanwinn Pharmchem Ltd. niorina tamin'ny taona 2002, indrindra hirotsaka amin'ny ny fampandrosoana, famokarana ary ny varotra ny fanafody intermediates gallic toy ny asidra sy ny Dérivés. isika mpamatsy mpitarika misahana manokana ny fanomezana ho an'ny iraisam-pirenena intermediates simika, fanafody, tsara simika, lamba sy ny Fandokoana orinasa. Shanghai kanwinn Pharmchem Ltd. taloha ho lehibe mpamatsy ny 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ho Roche Group. vokatra amidy tsara ao Japana, Etazonia sy Eoropa, miaraka amin'ny varotra isan-taona ny an-tapitrisany dolara. dia tsy mitsaha-mitombo hatrany hihaona amin'ny ilain'ny mpanjifa ny vokatra manara-penitra sy ny asa fanompoana tsara!
123-Trimethoxybenzene , 2.3.4-Trimethoxybenzaldehyde , Pyrogallic Acid , fanafody Intermediates , 1 2 3-Trimethoxybenzene , Gallachinensisp.E ,